Nofoanana tao anatin’ny fanafihana mahery vaika ny diabem-pireharehana tao Tbilisi · Global Voices teny Malagasy
Mpanora-gazety ~50 no notafihana nandritra ny fihetsiketsehana tsy-tia-fireharehana tany Tbilisi.
Voadika ny 13 Jolay 2021 4:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Português, Español, English
Pikantsary nalaina tao amin'ny horonantsary Radio Free Europe https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-pride-attacks/31342136.html
Tokony notontosaina tao Tbilisi renivohitr'i Georgie ny Diabem-pamendrehana tamin'ny 5 Jolay, nokarakaraina ho anisan'ny Herinandrom-pireharehana amin'ity taona ity, saingy nofoanana izany noho ny fanafihana mahery vaika nataon'ny mpanohitra ny LGBTQ. Mpanao gazety miisa 50 farafahakeliny no voadaroka ary nisy andian'olona nanafika sy nandroba ny biraon'ny mpikarakara ny diabe, Hetsika Fireharehana sy Henatra Tbilisi (Tbilisi Pride and Shame), vondrona mpikatroka liberaly.
Mampiseho ny fianihan'ny andian'olona teo an-davarangan'ny biraon'ny Fireharehana Tbilisi ny horonantsary iray, ary avy eo nandriatra sy nandoro ny sainam-pireharehana nihantona teo ivelany. Farafahakeliny mpizahatany iray no naiditra hopitaly satria noheverin'ireo andian'olona fa pelaka izy io. Nanameloka ny fanafihana sy ny tsy fihetsehan'ny tompon'andraikitra ao an-toerana tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo ny mpikarakara ny diabe, Fireharehana Tbilisi. “Amin'ny anaran'ny Fireharehana Tbilisi, tianay ny manambara fa tsy hatao anio ny Diabem-pahamendrehana ho an'ny firaisankina. Tsy ny governemanta ihany no tsy niantoka ny fiarovana ny vondrom-piarahamonina pelaka sy ireo mpanohana anay, fa amin'ny fihetsika nataon'izy ireo dia nitsabaka ny zonay amin'ny fahalalahana mivory izy ireo,” hoy ny fanambarana. Ny ampitson'io andro io, nanome toky ny Minisiteran'ny atitany any Georgie fa hanao fanadihadiana tamin'ny fanafihana ny biraon'ny Hetsi-pireharehana sy Henatra Tbilisi.
Fanambarana feno avy amin'ny Fireharehana Tbilisi momba ny fanafoanana ny ‘Diabem-pahamendrehana’. Fandikanteny avy amin'ny OC Media.
Andro iray monja talohan'ny diabe dia nanoratra tao amin'ny Facebook ny mpikarakara hoe “Mino izahay fa hiaraka hametraka tantara, hanao dingana lehibe mankany amin'ny fananganana fanjakana izay hiarovana ny zon'olombelona ary manana fahafahana mitovy ny olona.” Saingy nampiseho tantara hafa tany Géorgie ny porofon'ny herisetra ny ampitson'io, izay feno fankahalana sy tsy fandeferana.
(@TbilisiPride) July 5, 2021
Vondron'olona mahery setra nanafika ny biraon'ny Fireharehana Tbilisi, namaky ny varavarankely sy ny fitaovan'ny mpikambana. Nanambaran'izy ireo fa hodorany ny birao. Miantso ny polisy izahay mba handray ny andraikiny mifanaraka amin'ny lalàna sy hisambotra ireo vondron'olona mahery setra.
Nanafika ny mpanao gazety ireo mpanao fihetsiketsehana miampanga azy ireo ho “mampiroborobo ny vondrom-piarahamonina LGBT.” Mpanao gazety iray no voalaza fa notaritaritin'ny pretra iray. Araka ny tatitra nataon'ny OC Media, ny Eglizy Ortodoksa Zeorziana izay nahitana ireo pretra teny an-toerana nandritra ny fihetsiketsehana no tena mpikarakara ny fihetsiketsehana manohitra ny Fireharehana ary toa hita namely mpanao gazety iray farafahakeliny.
Sary mampihoron-koditra! Rati Tsverava, ilay mpanao gazety Zeorziana, voarahona sy nodarohan'ireo andian'olona mpankahala pelaka, notaritaritin'ny pretra teny amin'ny araben'i #Tbilisi. Mpanao gazety am-polony maro ihany koa no voatafika tamin'ny fomba maherisetra raha nijoro teny ny polisy. Tsy ampy ny polisy naparitaky ny governemanta
Araka ny voalazan'ny Civil.ge, nandrisika ny herisetra “ho an'ny tanindrazana” ny pretra iray raha nanao lahateny ho an'ny vahoaka tamin'ny 5 Jolay:
“Tsy maintsy mampiasa herisetra ianao amin'ny anaran'ny tanindrazana, ny firenena, ny masina,” hoy ny pretra iray tamin'ny vahoaka avy amin'ny elatra farany havanana mpankahala pelaka androany.
Nilaza ny Patriarka an'ny fiangonana Orthodoksa fa miala amin'ireo fanambarana miantso ho amin'ny herisetra izy ireo.
Ny hetsika Fahamenarana, vondrona mpikatroka Zeorziana mampiantrano ireo mpikarakara ny Fireharehana Tbilisi dia noterena hiala haingana amin'ny biraon'izy ireo noho ny herisetra, hoy ny Amnesty International.
Nomelohin'ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny mpitondra Eoropeana ny fanafihana.
“#Georgia: Melohinay ny fandrahonana sy ny fanafihana tao amin'ny araben'ny #TbilisiPride2021 tamin'ireo mpanao gazety sy mpikarakara. Miantso an'i Georgie izahay hiaro ny mpandray anjara amin'ny fivoriambe am-pilaminana, ary hanadihady ny herisetra sy ny fanavakavahana atao amin'ny olona #LGBTI. Tsy maintsy tanana ho tompon'andraikitra ireo nahavanon-doza.
Manahy ny ODIHR ankehitriny momba ny herisetra any Tbilisi ary koa ny fanafoanana ilay fivoriana am-pilaminana kasaina hatao. Tsy maintsy hanaovana fanadihadiana feno sy haingana ny tsirairay amin'ireo fanafihana nikendrena ireo mpikatroka mafàna fo, mpanao gazety, sy ny fananan'izy ireo
— 🇧🇪 Belgium MFA 🌈 (@BelgiumMFA) July 5, 2021
Manameloka tanteraka ny fanafihana mahery setra natao androany tamin'ireo mpikatroka sivily LGBTIQ, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ary mpanao gazety i Belzika.
Fanafihana atao amin'ny zon'olombelona sy ny fahalalahana maneho hevitra izany.
Tsy maintsy manenjika ireo nanao izany fanafihana izany ny manampahefana Zeorziana.
Masoivoho vahiny maro any Georgie no namoaka fanambarana iraisana nanameloka ny fanafihana. “Manameloka ny fanafihana mahery vaika natao androany tamin'ireo mpikatroka sivily, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ary mpanao gazety izahay, ary koa ny tsy fahombiazan'ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra ara-pivavahana manameloka ity herisetra ity. Zon'olombelona iantohan'ny lalàmpanorenan'i Georgie ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana am-pilaminana. Tsy ekena tsotra izao ny herisetra ary tsy azo ialana tsiny », hoy ny fanambarana nosoniavin'ireo masoivoho sy delegasiona teo amin'ny roapolo.
Nilaza ny tale lefitry ny Amnesty International ho an'i Eoropa Atsinanana sy Azia Afovoany, Denis Krivosheev, fa “tsy niomana tamin'ny fivadihan'ity hetsika ity ary tsy nanome valiny mahafapo tamin'ny herisetra ny governemanta fa nandefa polisy vitsy izay nanohitra fotsiny ny fanafihana mahery setra fa tsy nanomana fiarovana voarindra ho an'ireo mpikatroka LGBTI.” Tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny CNN International, nilaza i Giorgi Tabagari, talen'ny Fireharehana Tbilisi fa tsy maintsy niova toerana imbetsaka nandritra ny andro ny ekipa noho ny fandrahonana sady nanasongadinana indray ny “tsy fahombiazan'ny fanjakana mihitsy” koa izy.
Raha ny filazan'ny praiminisitra Zeorziana dia ny mpikarakara ny diabe no tompon'antoka tamin'io herisetra io. Nilaza ny praiminisitra Irakli Garibashvili raha niresaka nandritra ny fivorian'ny governemanta fa “tsy am-pisainana” ny an'ny mpikarakara ny hanao diabe amin'ny toerana ho an'ny daholobe izay mety hiteraka “fifandonana sivily” amin'ny fotoana ahitan'ny ankamaroan'ny mponina ny LGBTQ ho “tsy azo ekena.”
Niampanga ny filoha teo aloha sy ny Hetsika Fiombonana Nasionaly Mikheil Saakashvili ihany koa ny PM tamin'ny fikarakarana ny diabe mba hanaovana “fanakorontanana” ao amin'ny fiarahamonina Zeorziana araka ny tatitra nataon'ny Civil.ge. Talohan'izay dia nampitandrina ny mpanao fanentanana tamin'ny fanambarana ny Minisiteran'ny Atitany mba tsy handray anjara amin'ny diabe, “noho ny habetsaky ny fihetsiketsehan'ny fanoherana nomanin'ireo vondrona mpanohitra.”
Nanomboka ny 2 Jolay ny herinandrom-pireharehana Tbilisi, nahitana fandefasana sarimihetsika manokana fanadihadiana momba ny diabem-pireharehana 2019 izay nofoanana taorian'ny fandavan'ny polisy fanomezana fiarovana teo an-toerana. Natrehin'ireo diplaomaty sy ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena tao an-toerana ilay sarimihetsika, “Diabe ho an'ny Fahamendrehana”. Nivory teo ivelan'ny toerana nandefasana ny sarimihetsika ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fireharehana raha nisambotra olona teo amin'ny roapolo teo ho eo izay nikasa hanakorontana ny hetsika ny polisy. Ny diaben'ny fahamendrehana tamin'ity taona ity no faratampon'ireo andiana hetsika mandritra ny herinandro maro izay nokasaina hankalazana ny Fireharehana 2021.
Fankalazana fotsiny ihany no niafaran'izany. Araka ny nolazain'ny mpikarakara ny diabe, tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo dia “fihantsiana ady tamin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny soatoavina demaokratika ary ny lalana Eoropeana ao amin'ny firenena” ny herisetra hita tamin'ny 5 Jolay.